Ahoana no fomba ahazoana vola matotra an-tserasera?
Ankehitriny, mihamaro ny olona mitady loharanom-bola fanampiny amin'ny alàlan'ny fahazoana vola amin'ny Internet. Mora kokoa ny manao izany ankehitriny noho ny tamin'ny taona vitsy lasa izay satria misy sehatra maro hanehoana ny fahaizany ireo mpiasa tsy miankina.
Bitcoin dia vola virtoaly. Fa inona ny bitcoin ary nahoana no vola virtoaly izany?
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 3,710.